Faraska Zaino: waa maxay, astaamaha iyo noocyada | Fardaha Noti
Ereyga shandad dhowr macne ayuu leeyahay, laakiin midka na daneeya waa midka kasocda ereyada saim ka yimid Carabi Andalusiya iyo saami carabiga classic maxay uga jeedaan 'taas oo gebi ahaanba madow'. Isreebreebkaan waxaa loo adeegsadaa fardo iyo dibi leh midab jaakad astaamo leh: bunni madow marka laga hadlayo kiisii ​​hore iyo madow kan dambe, iyadoo si gaar ah loo leeyahay in uusan jiri karin midab kale oo kala duwan, haba yaraadee.
Hadda, Muxuu yahay faraska Zaino? Waa kan Waxaa lagu gartaa iyadoo maqaarka midabkiisu midabkiisu midabkiisu midabkiisu yahay midab buluug ah leh iyo cawrada, dabada iyo dhammaadka madow (Dhammaadka waxaan tixraaceynaa qaybta terminal ee addimada oo laga tiriyo jilibka iyo naadiyada hoos). Madaxiisa iyo daboolkiisu waxay leeyihiin a iskudhafan isku dhafan oo ah timo madow iyo casaan oo boqolkiiba ay go'aamin doonaan mid ama noocyada kale faraska loo yaqaan 'chestnut faras', laga soo bilaabo kan ugu fudud: xabadka xabadka ee dahabiga ah, illaa kan ugu madow: xabadka madow ee madow.
Sideen wax u arki karnaa xabadka waa nooc dhogorta ka mid ah, intaasna kaliya maahan, waa a ee ugu caansan uguna caansan maxaa yeelay taariikhda sinnaanta, bayshu waxay faafinayeen iyagoo daboolaya jinsiyado kala duwan midba midka kale kaga duwan yahay fasalka, muuqaalka, nooca, iyo dabeecadda. Xaaladda dambe, waxaan ka helaynaa saddex laamood oo kala duwan: dhiig qabow, dhiig diiran iyo dhiig diiran. Dadka qabow-dhiiggu badanaa waa dad saaxiibtinimo badan isla markaana cabsi leh; kuwa dhiigga dhexdhexaadka ahi waxay leeyihiin kacsanaan iyo xoog, halka kuwa dhiigga diirran, oo guud ahaan ka yimaada Carabta iyo Isbaanishka, ay yihiin kuwo dabiici ah oo dabeecad u leh dabeecad iyaga u gaar ah.
1 Jaakad Equine
2 Noocyo faras Zaino
Muuqaalka cajiibka ah ee dhaqanka farasku waa dhogor, kaas oo gudbin kara macluumaadka aasaasiga ah ee xayawaanka, sida cabirka caafimaadkiisa ama qiimeynta awoodiisa uu ugu adeegi karo aadanaha.
Dhogorta waxaan uga jeednaa oo ay dejiyeen timaha jidhka xayawaankiisa, manka iyo dabada. Waxa go'aamiya midabka jaakadda faraska waa laba midab oo ay sameeyeen melanocytes (unugyo ku dhexjira maqaarka maqaarka oo sameeya midabbada midabka u siiya maqaarka iyo timaha) oo markaa masuul ka ah codka jaakada faraska: eumelanin, midab madow ama bunni ah, iyo pheomelanin, midab casaan ama jaalle ah. Codadkan, oo loo yaqaan aasaasiga, waxay isu beddelaan kuwo mugdi ah oo isku mid ah, iyagaana laga helaa noocyada kale ee tones-ka waxaa laga soo minguuriyaa marka hiddo-wadayaasha fuuq-baxa ay ficil sameynayaan, iyagoo ka dhigaya jaakadahaan aasaasiga ah kuwa fudud tusaalaha wanaagsan ee tan waa luul ama jaakadaha shaambada leh. La'aanta labadan midab ee kor lagu soo sheegay, wadar ama qayb ahaan, ayaa dhalisa saan iyo albinoids siday u kala horreeyaan, sidaas darteed dhibcaha cadcad ee maryaha aasaasiga ah laguma dhex xisaabiyo jaakadda lafteeda.
Gubasho Zaino Colorado Faras iyo Albinoid Faras
Qarnigii XNUMX-aad, waxay lamid tahay soo bandhigida kala duwanaansho aad u weyn marka loo eego jaakadooda, wax si tartiib tartiib ah u yaraaday xulashada iyo ka gudubka xayawaanka wanaagsan oo badanaa soo bandhiga midab qeexan, sida xabadka
Si aad uhesho waxyaabaha gaarka u ah jaakada xabadka, waxaa lagama maarmaan ah in la helo joogitaanka a gen loo yaqaan Agotí, magac ka yimid jaakadda guduudan ee faraskii hore, in kasta oo ay run tahay in qorayaasha qaarkood ay xaqiijinayaan in awoowayaashu ay ahaayeen yey iyo gurguuranayeen. Hiddo-wadahaani waa a xukuma kooxaha timaha madow dhammaantood, manshooda iyo dabo u dhigma.
Dharka ugu badan ee loo yaqaan 'chestnut' waa kan Waxay si siman ugu socotaa fardaha dhabarkiisa, iyadoo ka tagaysa canqowga, muuska, dabada iyo manka meelaha loogu talagalay midabada kale sida cawl madow ama madow. Badanaa waxay leeyihiin dhibco yaryar oo midabyo cad iyo madow leh oo ku yaal xagasha iyo muuska.
Meelaha dhexdooda waxaan ka helnaa noocyo kala duwan oo dhogor ah oo noo oggolaanaya inaan kala saarno.
Noocyo faras Zaino
Waxaa loo tixgeliyaa astaamaha mulatto, halkaasoo midabadiisa aasaasiga ah ay ka mid yihiin bunni iyo guduud, marka laga reebo midabada madow ama madow ee madow ee manes, dabo, xiiq iyo anqawyada, Way fududahay in la garto in farasku yahay laabta marka loo eego falanqaynta asalka ama nooc gaar ah oo sheegay in xayawaanku soo bandhigo. Xusuusnow in faraska xabadka uu leeyahay astaamo jireed oo kala duwan maxaa yeelay noocyo badan ayaa leh jaakad noocan ah.
Intii lagu gudajiray tobannaan sano ee lasoo dhaafay horumarka dhinaca hidaha ayaa ka muhiimsanaa berrinka fardaha, falanqaynta habka isku dhafka hiddo-wadaha jinsiyadaha kala duwan, jubbadaha iyo kala-saarista kuwii aan la aqoon.
Hidda-wadaha ayaa loo qaybiyaa waqtiga uurka ee caloosha, tani waa mid ka mid ah arrimaha go'aamiya hooska kala duwan ee jaakadda faraska. Waxay sidoo kale saameyn ku leedahay hadday tahay dib-u-noqosho ama awood, badanaa hiddo-wadayaasha ugu badan waa kuwa midabada madow sida madow ama bunni ka soo horjeedda noocyada kale ee midabaynta sida casaanka ama huruudda ah.
Chestnut zaino, hooyo iyo dibi
Daraasado lagu sameeyay arimahan ayaa suura galiyay in la abuuro diiwaan ay ku jiraan qodobo ay ka mid yihiin jaakada xayawaanka, nooca, cimilada iyo la qabsiga. Isagoo ka hadlaya fardaha baay, qaybta aadka noo xiiseysa waa tan koowaad, dhogorta, meesha Waxaan ka helnaa kala sooc yar oo leh noocyo kala duwan oo ay fardahaasi leeyihiin jaakad ahaan. Kala soocidan, oo aad ka heli doonto hoosta, waa la dalbaday laga soo bilaabo khafiifka ilaa noocyada ugu madow.
xabadka dahabka ah Iyagu waa kuwa leh midab huruud badan, oo lagu daray bunni khafiif ah, midabbo ayaa indhaha ka farxiya.
Zaino casaanka guud, Waxay leedahay midab guduud mugdi ah (midab adag), kaas oo si tartiib tartiib ah hoos ugu dhigaya midabada yar ee liinta ama bunni aad u khafiif ah iyo taabasho hurdi ah oo ku taal qaybaha kala duwan ee jirka. Haddii ay leedahay lugaha adhiga waxaa loo tixgeliyaa inay tahay xayawaan aad u fiican.
Chestnut zaino, Waa nooc gaar ah oo xabadka casaanka ah loogu magac daray u ekaanshaha midabka qolofta qolofta, magac laga dhaxlay Spain.
Zaino casaan guban, oo midabkiisu casaanka yahay ka sarreeya oo madow yahay. Dabada, manka iyo koofiyadaha ayaa madow. Qorayaasha qaar ayaa sidoo kale tixraacaya noocyada nooca loo yaqaan 'Chestnut' sida dhiigga dibiga oo gaduud ah halka kuwa kalena ay ku adkeysanayaan inay yihiin laba nooc oo kala duwan iyagoo ku doodaya in kan dambe uu leeyahay cod aad u firfircoon oo olola halka xabadka casaanka ee gubtay, in kasta oo uu leeyahay midab casaan sare leh, haddana wuu ka madowyahay.
Sino mule sanka, Iyagu waa kuwa leh ash ka badan ama midab cirro leh oo afka dul saaran, oo leh muuqaal baqal ah oo ay weheliyaan astaamo sigaar madow iyo midabyo huruud ah. Sanka baqalku waxaa lagu go'aamiyaa dheecaan, waana muuqaal muuqaal ah oo wajiga ah sida kan macaara chestnut kaas oo ku dhici kara nooc kasta oo jaakad ah (xabadka xabadka waxa kaga sarreeya dhammaan xabadka casaanka iyo xabadka dahabka ah). Labadan nooc ee madaxa ah ayaa qorayaashu u tixgeliyaan nooc ka mid ah dhogorta lafteeda, inkasta oo ay jiraan waxoogaa khilaaf ah.
- Sullen Zaino, Iyagu waa kuwa soo bandhiga midabyo casaan badan, go'aaminaya qaar ka mid ah codadka madow oo leh khilaaf yar oo timo bunni ah. Noocyada fardaha ayaa si aad ah looga doonayaa bulshada fardaha quruxdooda darteed.
Boorsada, wuxuu leeyahay dhammaan astaamaha lagu sheegay xayawaankan noocan ah iyo boqolkiiba timo casaan iyo madow leh oo isdaba-joog ah waa qiyaastii midkiiba 50%.
Zaino pangaré, Waa marka muuska, maqaarka indhaha hoostiisa, kilkilooyinka, xabadka, caloosha, xiiqyada iyo saraawiisha, ay yeeshaan midab la maydhay (jaalle ka sii badan), inta ka hartay jaakaddu waa zaina. Waxaan wajahaynaa nooc kale oo dheecaan ah sida sanka oo baqalka ah. Pangaré waa wax gaar ah oo jaakad ah oo laga heli karo jaakado kala duwan, laakiin baysyada waa meesha lagu arko inta badan, gaar ahaan gaduud gaduud iyo baal dahab ah.
Black Zaino, oo ah midab madow oo madow, timaha madaxiisa iyo jaakaddiisu waa madow yihiin oo guduudan yihiin kuwa ugu badan ee boqolleyda timo madow, taas oo kaga duwan casaanka xabadka.
Black Zaino faras
Si aan ugu soo gabagabeeyo fardaha feedhaha sheeg taas jaakadoodu waxaa laga yaabaa inay muujiso kala duwanaansho yar markii ay ka gudbaan noocyada qaar. Waxay soo bandhigi karaan, tusaale ahaan, albinisms qayb ahaan sida xaalada overos iyo tobianos; xoojinta sida smudged iyo giringiriyey; rosillism marka laga hadlayo rosillos iyo rosillos moros, ama tordillismo sida tordillo xun.
Waxaas oo dhan, sidaan ku soo xusnay bartamaha maqaalka qaab burush yar, waxaa u sabab ah hiddo-wadaha. Waxaa jira waqtiyo marka hidde-wadaha faraska baay laga yaabo inuu kayaryahay, sida markuu faras la kulmo ee nadiifin. Xaaladaha qaarkood nabaad-guurka yaryar ee qaabka jiirarka ayaa markhaati laga noqon karaa yar aagga badhida xoolaha. Kiis kale oo ka dhashay iskutallaabta u dhaxaysa faraska xabadka iyo wadnaha oo dhan, waa midka ka dhasha helitaanka xayawaan badan oo mongrel ah oo soo bandhiga dhibco waaweyn oo weheliya jidhkeeda iyada oo siineysa muuqaalka astaamaha lo'da Holstein.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Faraska Zaino
Ciyaaraha faraska 3D: Khadka tooska ah iyo kombuyuutarka